စပိန်နှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
အကောင်းဆုံး စပိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကိုယ်စားလှယ် နှင့်ရှေ့နေများ စပိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများစပိန်နိုင်ငံရှိနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
စပိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသည်စပိန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ စပိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ စပိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ စပိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒုတိယနေထိုင်ခြင်း၊ , စပိန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခြင်း၊ စပိန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခြင်း၊ စပိန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ စပိန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ စပိန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ စပိန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသား၊ စပိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ စပိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ စပိန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ စပိန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ စပိန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်များ၊ စပိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ စပိန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စပိန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ၊ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ် စပိန်နိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စပိန်တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စပိန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံနှင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စပိန်နိုင်ငံတွင်သံတမန်ဆိုင်ရာဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စပိန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စပိန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စပိန်တွင်ရွှေဗီဇာ၊ စပိန်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ စပိန်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ စပိန်တွင်ဒုတိယဗီဇာအစီအစဉ်၊ စပိန်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ စပိန်တွင်ရွှေဗီဇာ၊ နိုင်ငံသားနှင့်စပိန်တွင်ရွှေဗီဇာ၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီဇာ စပိန်နိုင်ငံတွင်စပိန်နိုင်ငံမှရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ စပိန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ စပိန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်စပိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်စပိန်နိုင်ငံအတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - EUR 500,000
စပိန်ကိုကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ်ဘဝဘဝရည်မှန်းချက်လို့အမြဲတမ်းပုံဖော်ကြတာကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုမလွယ်ကူလှပါဘူး။ ကွဲပြားခြားနားသောမြင်ကွင်း၊ စွမ်းအားပြည့်အင်ဂျင်နီယာကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်နိုင်ငံများစွာနှင့်ယင်း၏ထူးခြားသည့်လေထုနှင့်လှပသောပင်လယ်ကမ်းခြေများပါ ၀ င်သည်။
ဘလွန်းဘာ့ဂ်မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၆၉ နိုင်ငံ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရစပိန်နိုင်ငံအားကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျိုးအရှိဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့သည်။ စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းသည်အထွေထွေသာယာဝပြောမှုတိုးပွားစေသည့်အကြောင်းရင်းအချို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
ကုလသမဂ္ဂမှဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းစပိန်သည်ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများအကြား၊ ဂျပန်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်နောက်ကွယ်မှကမ္ဘာသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါအမြင့်ဆုံးသောအနာဂတ်ရှိသည်။ ၂၀၄၀ ပြည့်နှစ်တွင်စပိန်နိုင်ငံသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်သက်တမ်းအရှည်ဆုံးသက်တမ်း ၈၆ နှစ်ခန့်ရှိပြီးဂျပန်၊ စင်္ကာပူနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတို့သွားလာနိုင်သည်။
Lucas Fox Style ၏အဓိကအကြောင်းပြချက် ၁၀ ခုမှာကမ္ဘာ့စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာဟော့စပေါ့သည်အလွန်အရေးကြီးသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွက်လုံခြုံမှုရှိသောကြောင့်စပိန်၏အခြေအနေကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အထက်တန်းလွှာပင်လယ်ကမ်းခြေ၏ဘဝလမ်းစဉ်သည်အိုင်ဘာရီယန်းမြေယာမြေထဲပင်လယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသည်ဟုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံယုံကြည်မှုအားရှင်းလင်းစေသည်။ စပိန်သည်အလွန်ကြီးမားပြီးအလွန်ကြီးမားသည့်လွင်ပြင်၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေရာများနှင့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုလှုပ်ခတ်စေသောကမ်းရိုးတန်း၏အရှည်နှင့်အတူဤသည်သည်ရိုးသားမှုမရှိသောရာသီဥတုဆန့်ကျင်မှုများရှိသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အကယ်စင်စစ်၎င်းသည်လွင်ပြင်ပေါ်တွင်သွန်းလောင်းသော်လည်းရာသီဥတုကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံလေထုသည်သင့်ကိုမနှိမ့်ချနိုင်ပါ။ သင် Ibiza ၏အဖြူရောင်သဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင်အနားယူနေသည်ဖြစ်စေ၊ Pyrenees ၏နှင်းလျှောစီးမျောမျောမျောမျောများသို့သွားသည်ဖြစ်စေ၊ မြောက်ဘက်၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဂါလာစီယန်ကမ်းရိုးတန်းကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းရှိမရှိမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်သည်သင်၏မဟာမိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
စပိန်နိုင်ငံတွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းများအပါအဝင်ကီလိုမီတာ ၈၀၀၀ နှင့်ကျွန်းကမ်းရိုးတန်းရှိသည်။ clearုံကြည်လင်ပြတ်သားသောရေပြာ၊ သဲဖြူ၊ သာယာသောကြမ်းတမ်းသောမျက်နှာများ၊ မျက်နှာပြင်များနှင့်ကြည်နူးဖွယ်မြင့်တက်လာခြင်းကိုစဉ်းစားပါ။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်နေတွင်အနားယူခြင်း၊ ရက်လုပ်ခြင်း၊ surfing လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မာရသွန်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုရွေးချယ်ပါ။
ကျယ်ပြန့်စွာရောက်ရှိနေသောအပြာရောင်အလံကိုအတည်ပြုခြင်းကစပိန်နိုင်ငံ၏အခြေအနေကိုပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်၏အရည်အသွေးနှင့်သာယာဝပြောမှုတို့အတွက်အလေးအနက်ဖော်ပြသည်။ ကမ်းခြေ ၅၆၉ ခု (စုစုပေါင်း၏ ၂၀%) သည်ဤလေးစားဖွယ်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပြသရန်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည်။ ကမ္ဘာ့အလံပင်လယ်ကမ်းခြေ၏ ၁၆% သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်ရှိသည်။ ကမ်းခြေကမ်းခြေရှိအမှိုက်သရိုက်များနှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နေထိုင်သူများအတွက်ဤဘုံနေရင်းဒေသများနှင့် ပတ်သက်၍ သေချာစေရန်ကူညီရန်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားရှိသည်။
စပိန်စားသောက်ဆိုင်များသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည့်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်များအနက်မှအဓိကနေရာသုံးခုတွင်ပြသခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူသိများသော Ferran Adriáနှင့် El Bullí (အကြိမ်ပေါင်းများစွာအနိုင်ရ) နှင့် Roca Brothers နှင့် El Celler Can တို့၏အမည်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ Roca (နှစ်ကြိမ်အနိုင်ရ) ။
ဤစည်းဝေးကြီးများသည်နိုင်ငံ၏အတွေ့အကြုံများတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်ကြားမှစပိန်သည်အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်အသားအရောင်ခွဲခြားမှုလွန်စွာမကပါ။ ထိုနည်းတူစွာပင်ကမ္ဘာသည်ထင်ရှားသောအထူးကုများ၊ အဆိုတော်များနှင့်စာရေးဆရာများကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍ လည်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Goya, Velásquez, Picasso, Miró, Dalí, Cervantes နှင့်Gaudí…၏ကံကောင်းထောက်မစွာသောစာရင်းကိုသမိုင်းဝင်စင်တာများ၊ လမ်းများနှင့်ပြဇာတ်ရုံများနှင့်စပိန်ယဉ်ကျေးမှုကိုချီးမွမ်းသည့်မြင်ကွင်းများကိုပြသနိုင်သည်။
စပိန်သည်လွန်ခဲ့သောတစ်ချိန်ကခွန်အားရရန်ချစ်မြတ်နိုးသော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်တသမတ်တည်းတိုးတက်မှုများကိုစွဲကိုင်ထားပြီးကမ္ဘာ့လူမှုရေးစင်မြင့်တွင်လာမည့်အရာများ၌အဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုတည်ဆောက်ရန်ယင်း၏လွန်စွာစွဲမက်နေသောအတိတ်စိတ်ကူးကိုအသုံးချနေသည်။ စပိန်နိုင်ငံသို့သွားသောမည်သည့်နေရာတွင်မဆို Castellers သည်ဆွဲငင်အား - စိန်ခေါ်မှုများရှိသောနေရာများတွင်တည်ဆောက်ခြင်းမှသည်ပန်းခြံများသို့မဟုတ်မြို့တွင်းလမ်းဆုံများပေါ်တွင်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရယူရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်ပန်းခြံများ၌အပြင်ဘက်တွင်ဖျော်ဖြေသောအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများအထိဖြစ်သည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်နိုင်ငံသား၊ လက်ရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုသည်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်ပြီး၊ ဘဝလမ်းစဉ်၏အတော်အတန်မြင့်မားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်သည်စပိန်ကိုနံပါတ် ၁၂ နေရာတွင်ထားရှိခဲ့ပြီးအခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်မဟာဗျူဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စံနမူနာကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၇,၀၀၀ ကီလိုမီတာရှည်သောဥယျာဉ်များရှိသည့်အကြီးမားဆုံးလမ်းကွန်ယက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥရောပ၏အရှည်ဆုံးရထားလမ်းကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိဘာစီလိုနာကို Paris နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အပြင်လေထုနှင့်သမုဒ္ဒရာတို့ပါ ၀ င်သည်။
ဒါကြောင့်လှည့်ပတ်ရတာလွယ်ပါတယ်။ စပိန်ကလူတွေကိုသွားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အစွမ်းထက်သောအနာဂတ်အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုဖန်တီးနေသည်။ အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာအဆန်းမဟုတ်ပါ။ အပြည့်အဝကျယ်ပြန့်သော broadband ပါ ၀ င်မှုသည်မိသားစုများနှင့်အများပြည်သူအာဏာပိုင်များနှင့်သာယာဝပြောရေးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်များကိုပင်ဆက်သွယ်မှုပြုသော်လည်း e-အဆင့်များကိုဆုပ်ကိုင်ထားသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျောင်းပေါင်း ၂၂၆ ကျောင်းရှိသည်။ ဥရောပနှင့်အတိတ်ကာလတစ်လျှောက်ဆေးကုသမှုကိုလေးစားသည်၊ ပန်းခြံများကိုစောင့်ကြည့်သည်၊ လမ်းများသန့်ရှင်းပြီးအမှိုက်နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည်အပြစ်ကင်းစင်ပြီးထိရောက်စွာစီမံသည်။
ပွဲနေ့များသည်စပိန်နိုင်ငံရှိအနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတိုင်းတန်ဖိုးထားနိုင်သောပွဲတော်တစ်ခုမပါဘဲ ၇ ရက်ကြာအောင်မရည်ရွယ်နိုင်သောရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖြစ်သည်။ ကက်သလစ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနှင့်စပိန်နိုင်ငံတွင်အခမ်းအနားများနှင့်ချီတက်ပွဲများရှိသည်။ မြို့တော်၊ မြို့နှင့်မြို့တိုင်းတွင်အသက်တာအတွက်အရေးပါသည်။
ပန်ပလိုနာ၏ဆန်ဖာမင်ပွဲတော်၊ ကျော်ကြားသော 'နွားများပြေးခြင်း' နှင့်ဗလန်စီယာရှိ La Tomatina ပွဲကိုကျင်းပသော La Tomatina ပွဲတော်တွင်ယောက်ျားများ ၄၀,၀၀၀ ကျော်၏သဘာဝအတိုင်းထုတ်ကုန်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပွဲတော်များသည်ကမ္ဘာချီအသွင်အပြင်များ၊ သို့မဟုတ်မီးသတ်သမား - 'စစ်မှန်သော' စပိန်တွင် ပို၍ ရှင်းလင်းစွာနေထိုင်ပြီးနေထိုင်ပါ။
ဤအစက်အပြောက် baristas နှင့်အလွန်အကျွံပဲမျိုးစုံနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်စွမ်းရည်ကင်းမဲ့နေသည်။ ၎င်းတို့သည်ကွန်ယက်ချုပ်များဖြစ်ပြီးငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုမန်နေဂျာသည်ငွေသတ္တုပါးမှအသားညှပ်ပေါင်မုန့်များကိုအရှေ့ဘက်သို့ ၀ င်ရောက်လာသူများ၊ ဂျင်နှင့်လုပ်သူများသို့မဟုတ်ဝိုင်ဖန်ခွက်ကိုဟင်းလင်းပြင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကတ္တရာစေးပေါ်တွင်ကပ်ထားသောမတည်ငြိမ်သောထိုင်ခုံများတွင်သိမ်းဆည်းထားသောနေရာလည်းဖြစ်သည်။
ပြင်ပဘဝနေထိုင်မှုပုံစံသည်စပိန်ဝတ်စုံချန်ပီယံများစွာကိုမွေးမြူခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Seve Ballesteros၊ Rafa Nadal၊ Garbiñe Muguruza၊ Miguel Indurain နှင့် Fernando Alonso တို့သည်ကလပ်အသင်းများနှင့်နီးကပ်စွာထိုင်နေကြသည်။
နာမည်ကြီး ၁၉၉၂ အိုလံပစ်ပွဲပြီးကတည်းကကစားပွဲအတွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးသောပြိုင်ဘက်အမျိုးသမီးအရေအတွက်သည် ၃၀၀,၀၀၀ မှ ၇၀၀,၀၀၀ အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ သို့သော်မည်သူမဆိုစပိန်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၏ဘဝပုံစံကိုအသုံးချနိုင်သည်။
တောင်တက်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ surfing လုပ်ခြင်း၊ ဘောလုံးနှင့်ဘောလုံးမှတင်းနစ်နှင့်လက်ပစ်ဘောလုံးအထိ၊ ကလပ်ရှိ Padel ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလှည့်လည်ခြင်းမှသည်ကဖေးကိုရှာဖွေနေသည့်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာမြို့တစ်လျှောက်ရှိမဲခေါင်ဒေသအထိ၊ ရှောင်ဖို့ခဲယဉ်းသည်။
8 ။ ပုံစံ
အိုင်ဘာရီးယန်အရေးနိမ့်သမိုင်းက၎င်း၏အမာရွတ်များကိုချန်လှပ်ထားခဲ့ပြီး၊ လူမှုရေးပုလဲများကိုထပ်မံပေးပြီးတိုင်းပြည်ကိုလွတ်လပ်သောအပြင်ဘက်ပြပွဲခန်းမအဖြစ်ရောမ၊ အာရပ်၊ Gothic နှင့် Modernist တို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်းမှတ်တိုင်များကိုတည်ဆောက်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပတ်သက်သောစွမ်းအင်သည်စပိန်၏ဘဝလမ်းစဉ်၏အခြေခံဖြစ်သည်။ ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေခံနေရာများဖြစ်သောမရေရာမှုမရှိသောကြောင့်ဘာစီလိုနာမှ Sagrada Familia၊ Granada ၏ Alhambra၊ Salamanca ၏ Old City နှင့် Cordoba ရှိ La Mesquita - florid, Gothic, Renaissance နှင့် Moorish Mudéjarသည်အခြေခံအားဖြင့်ဗလီတစ်ခုနှင့်ဗလီတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ကွန်ယက်၏ရင်းနှီးသောခံစားချက်ကစပိန်လူ့ဘောင်ကိုထိခိုက်စေသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်ပြောဆိုရန်၊ သဘောထားကွဲလွဲရန်နှင့်ဆင်နွှဲရန်စီစဉ်ကြသည်။ အသက်သည်မှတ်သားပြီး ၀ မ်းမြောက်သည်။ မိသားစုသည်အရာအားလုံးဖြစ်သည်။ သင်သည်မည်သည့်လတ်တလောတွင်တိုးချဲ့မှုရှိပါစေ၊ တည်ဆောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ပါစေတနင်္ဂနွေနေ့မွန်းတည့်ချိန်၌စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ရိုးရာအစဉ်အလာနှင့်အရိပ်ထိုးခြင်းစသည်ဖြင့်စပိန်၏လူ ဦး ရေသည်ဇာတ်ကောင်များနှင့်လူမှုရေးမုန်းတီးမှုများရောနှောနေပြီးရှည်လျားပြီးအကြမ်းမဖက်သောကာလအပေါ် မူတည်၍ နောက်ကျကျန်ခဲ့သည်။
သို့သော်ဤအရာသည် ၂၁ ရာစုသို့ဘဝ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအရာများ၌ရှေ့ဆောင်တစ် ဦး အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ရန်အာမခံချက်ကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။ စပိန်တစ် ဦး ချင်းသည်ပျော်ရွှင်ပြီးခိုင်မာသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသော်လည်းကံကောင်းထောက်မစွာ၊ သူတို့သည်လည်းဖိတ်ကြားခြင်းခံရနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အပယ်ခံများကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်နိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးပုံစံဖြင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံကိုအသုံးချနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးအနေဖြင့်အကောင်းဆုံးဘဝလမ်းစဉ်ကိုထူထောင်သည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေးအခေါ်အမျိုးမျိုးရှိသော်လည်းစပိန်၏ဆွဲဆောင်မှုမှာနှစ်ပေါင်းများစွာမကကမ္ဘာပေါ်မှထုတ်လုပ်ခဲ့သောသာမာန်ခရက်ဒစ်အမြောက်အမြားတွင်တည်ရှိသည်။
သင်ရှာဖွေသမျှမည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ စပိန်နိုင်ငံသည်သင်၏အကောင်းဆုံးဘ ၀ အတွက်အကောင်းဆုံးစံနမူနာကိုပြသနိုင်သောပွင့်လင်းသောနိုင်ငံများ၊ ကျွန်းများနှင့်ကမ်းရိုးတန်းများရှိသည်။ ၎င်းမှာသွက်လက်သောမြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းများ၊ ငြီးငွေ့ဖွယ်ငါးဖမ်းမြို့များ၊ စျေးကွက်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်မည်သည့်နေရာမှမဆိုသဟဇာတဖြစ်မှုနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုပေးသောကျယ်ပြန့်သောဖွင့်လှစ်သောအိုင်ဒီယာများရှိသည်။
ရေကန်များ၊ တောင်တန်းများနှင့်ချိုင့်ဝှမ်းများသည်တောက်ပသော superyacht marinas နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသစ်တို့နှင့်ပုံမှန်ကွာခြားမှုရှိသည်
စပိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို (၂) နှစ်ထုတ်ပေးသည်
စပိန်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်
2 ရက်သတ္တပတ်မှ 4
ဥပဒေရေးရာနေထိုင်မှု၏5နှစ်ပြီးနောက်
- အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှု (€ 500,000)
- အစုရှယ်ယာများသို့မဟုတ်ဘဏ်အပ်ငွေများ (ယူရို ၁ သန်း)
- အစိုးရကြွေးမြီ (ယူရို ၂ သန်း)
အဘယ်ကြောင့်စပိန်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားရ
စပိန်သည်ဥရောပအနောက်တောင်ပိုင်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးအားလပ်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ထူးခြားသောသဘာဝ၊ မတူကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းရှိသည်။ စပိန်သည်ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် Schengen aရိယာတွင်အပြည့်အ ၀ ပါဝင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစပိန်နိုင်ငံသားများသည်ဥရောပတစ်ခွင်လုံး၌ဗီဇာကင်းမဲ့သောခရီးသွားလာခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ စပိန်၏လူကြိုက်များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေထိုင်အစီအစဉ်ကိုအလွန်မြန်ဆန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်းသည်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအားနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်ရန်မလိုဘဲအားသာချက်များအားလုံးကိုပေးသည်။
၁၈ နှစ်အောက်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ကလေးများသည်အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူထံမှလက်ခံပြီးနောက်မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအစီအစဉ်အရနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ရရှိနိုင်သည်။ အသက် ၁၈ နှစ်အထက်မိဘများနှင့်ကလေးများသည်အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအပေါ်ငွေရေးကြေးရေးအရမှီခိုနေလျှင်လည်းအရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်သည်။
Residency စပိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
လုပ်ငန်းစဉ်ကအရမ်းမြန်တယ် လျှောက်လွှာတင်သွင်းခြင်းမှရက်ပေါင်း ၁၀-၁၅ ရက်သာကြာသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, လျှောက်လွှာတင်သွင်းခြင်းမပြုမီလျှောက်ထားသူတစ် ဦး ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုရရှိရန်ကတိကဝတ်ခဲ့ကြရပေမည်။ ဆိုလိုသည်မှာလျှောက်ထားသူသည်လျှောက်လွှာမတိုင်မီစပိန်သို့သွားရန်၊ ရွေးချယ်ထားသည့်အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်နှင့်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ရန်ဆိုလိုသည်။
အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါလျှောက်ထားသူသည်ရောင်းအားစတင်ရန်သိုက်ကိုလွှဲပြောင်းသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်နှစ်လမှသုံးလအထိကြာနိုင်သည်။ ပြီးနောက်လျှောက်ထားသူသည်လျှောက်လွှာ တင်၍ နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။
Spanish Law 14/2013 သည်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်အရအီးယူမဟုတ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုစပိန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံရန်အရည်အချင်းပြည့်မီစေသည်။ အောက်ပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည်စပိန်ရွှေဗီဇာအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေထိုင်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်အတွက်အနည်းဆုံးယူရို ၅၀၀,၀၀၀ ၏အနည်းဆုံးအိမ်ခြံမြေ ၀ ယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ဝယ်ယူထားသောအိမ်တွင်နေထိုင်ရန် (သို့) ငှားရန်ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဥပဒေနှင့်အစိုးရအခွန်အခများနှင့်အခွန်များကိုမိသားစု ၀ င်လေးယောက်အတွက်ယူရို ၆၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်ပေးဆောင်ရမည်။
စပိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် စပိန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ စပိန်နိုင်ငံအတွက် စပိန်နိုင်ငံရှိဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုစပိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုထောက်ပံ့ခြင်း၊ စပိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံတွင်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်စပိန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်စပိန်မှ Golden Visa သို့မဟုတ်စပိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုသာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ စပိန်နိုင်ငံမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ စပိန်သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ စပိန်နိုင်ငံရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်စပိန်အဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ စပိန်အတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၊ စပိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်၊ စပိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်နှင့်စပိန်အတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ
စပိန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့စပိန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ။
စပိန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
စပိန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
စပိန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
စပိန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
စပိန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
စပိန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
စပိန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန်တွင်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်စပိန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်သူတို့၏ Residency အတွက်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာလိုသောအခါတိုင်း၊ စပိန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်ရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်စပိန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်အတူကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးစပိန်နိုင်ငံရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိထားသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်စပိန် Residency
စပိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်သင်၏အောင်မြင်သောနေထိုင်မှုအတွက်စပိန်နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ စပိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ စပိန်သို့မဟုတ်စပိန်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင့်လိုအပ်ချက်ကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုစပိန်နိုင်ငံမှ Residence Permit ရယူရန်နှင့်ဖောက်သည်များထံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် First Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
စပိန်နိုင်ငံအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်အတူစပိန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူကူးရန်လိုအပ်သည်။
စပိန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်း။ စပိန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဖြည့်စွက်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
Duration:2ရက်သတ္တပတ်မှ 4
စပိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင်နှင့်အခြားအထောက်အပံ့များအတွက်စတင်ပြင်ဆင်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စပိန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစပိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများက Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် စပိန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်စပိန်နိုင်ငံမှသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် စပိန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် စပိန်နိုင်ငံတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်စပိန်နိုင်ငံမှသို့မဟုတ်စသည်ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် စပိန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် စပိန်နိုင်ငံရှိတရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် စပိန်နိုင်ငံအတွက် စပိန်ရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် စပိန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက စပိန်နိုင်ငံတွင်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် စပိန်အတွက်အထောက်အပံ့သည်စပိန်နိုင်ငံသို့ကုန်သွယ်ခြင်း၊ စပိန်တွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းအတွက်မရနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် စပိန်နိုင်ငံအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု စပိန်နိုင်ငံအတွက် စပိန်နိုင်ငံရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက စပိန် စပိန်နိုင်ငံမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် စပိန်အတွက်ရှေ့ရပျ စပိန်နိုင်ငံရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်စပိန်နှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုသေချာစွာစစ်ဆေးရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်သော်လည်းစပိန်ရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် စပိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
International Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်စပိန်၏တရားဝင်လိုအပ်ချက်များကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
စပိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်စပိန်အတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုစပိန်နိုင်ငံအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနေသည့်စပိန်နိုင်ငံတွင် Dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
စပိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့ရွက်များနှင့်ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောစပိန်အတွက်ဥပဒေအကျိုးဆောင်များကအတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ကတိကဝတ်ပြုထားသည့်စပိန်ကိုင်တွယ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လျှောက်လွှာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင်းဆုံး solicitors နှင့်အေးဂျင့်များရှိသည်။
စပိန်နိုင်ငံအတွက်သင်၏ Residency မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်စပိန်အတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများရှိပြီးစပိန်နိုင်ငံအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတ ၀ ှမ်းမှ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း။
အကယ်၍ စပိန်နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
စပိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ပါ
စပိန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်သူတို့၏အသက်အရွယ်များကိုအသေးစိတ်ဖြည့်ပါ။ စပိန်အတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ စပိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားအခကြေးငွေများဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ စပိန်နိုင်ငံအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန်နိုင်ငံသို့ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူစပိန်နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန်အတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ စပိန်တွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်တွင်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
စပိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းမှ Residency မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်လည်းစီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ စပိန်အတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပံ့ပိုးပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစပိန်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေသည့်ဆိုင်ဖွင့်ပေးသည်။
စပိန်အတွက်မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ Residency ကို ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်စပိန်နိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံတကာတွင်အကူအညီဖြင့်စပိန်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ကူညီသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ စပိန်မှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် (သို့) Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (စပိန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ စျေးသက်သာသည်။ )
စပိန်သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် စပိန်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ်အကောင့် စပိန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, စပိန်အတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် စပိန်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် စပိန်နိုင်ငံရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက် (သို့) crypto ဖြေရှင်းချက်များကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သငျသညျဖို့စီစဉ်ထားလျှင်စပိန် စပိန်နိုင်ငံရှိလက်ရှိစီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ စပိန်အတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
စပိန်နိုင်ငံရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ စပိန်အတွက်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် စပိန်အတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
စပိန်အတွက် Virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
စပိန်နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ စပိန်များအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, စပိန်အတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
စပိန်ရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
စပိန်တွင် setup ကိုစီးပွားရေး
စပိန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း စပိန်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ပေးပါသည်
စပိန်အတွက် Web ကိုဒီဇိုင်း
စပိန်နိုင်ငံတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
စပိန်အတွက် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
စပိန်နိုင်ငံရှိ App Development
စပိန်အတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
စပိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုစပိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ စပိန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ စပိန်အတွက်ဥပဒေအကြံပေးသည်စပိန်တွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ စပိန်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ စပိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့၏ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည် Client ၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သည်။
စပိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်စပိန်အတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလျှင်သို့မဟုတ်စပိန်နိုင်ငံသို့လည်ပတ်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင့်အားသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ စပိန်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏ရှေ့နေကိုစပိန်ပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သောတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်သည့်နိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်စပိန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - စပိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှနေထိုင်ခွင့်
စပိန်နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုစပိန်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်စပိန်နိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုကိုရယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ စပိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ စပိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ စပိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ စပိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ စပိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ အကောင်းဆုံးနေထိုင်မှုစပိန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်စပိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ စပိန်တွင်။
စပိန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် စပိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း စပိန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် စပိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် စပိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်
စပိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစပိန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်စပိန်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်စပိန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ စပိန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ စပိန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစပိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ စပိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားအကောင်းဆုံးနှင့်စပိန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်းစသည်တို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ အကောင်းဆုံးမှာစပိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်စပိန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများ။
စပိန်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု စပိန်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စပိန်နိုင်ငံတွင်စျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စပိန်နိုင်ငံတွင်စျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စပိန်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးများ စပိန်အတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
စပိန်နိုင်ငံရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုစပိန်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူသည်။ စပိန်သို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသည်။ စပိန်အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စပိန်နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ စပိန်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်စပိန်အတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ စပိန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စပိန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်။
စပိန်အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု စပိန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ စပိန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ စပိန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ စပိန်နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
စပိန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်စပိန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်စပိန်နိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရယူခြင်းစသည်တို့ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ စပိန်သို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ စပိန်နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သောရွှေဗီဇာအစီအစဉ်။ စပိန်အတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ စပိန်တွင်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်စပိန်အတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ စပိန်တွင်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စပိန်ရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်စပိန်အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
စပိန်အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | စပိန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ စပိန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ စပိန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ စပိန်အတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
စပိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
စပိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ယူရို ၅၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ စပိန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်စပိန်မှအေးဂျင့်များသည်စပိန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency ကိုထောက်ပံ့သည်။
Residency သည်စပိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Residency သည်စပိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်မြင့်မားပြီးအမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ Residency မှစပိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခကိုသာပေးဆောင်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုမည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှ Residency သည်အာရှမှစပိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ Residency သည်အာဖရိကမှစပိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှစပိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ မလေးရှားမှစပိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှစပိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှစပိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သီရိလင်္ကာမှစပိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ နီပေါမှစပိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ ယူအေအီးမှစပိန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု စပိန်နိုင်ငံအတွက်
စပိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
Ministerio de Educación, Cultura, y Deporte (စပိန်)
Ministerio de Empleo y Seguridad လူမှု (စပိန်ဘာသာ)
Ministerio de Hacienda (စပိန်ဘာသာ)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန (စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်)
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန (၏ဖော်ပြချက်နှင့်အတူစပိန် အင်္ဂလိပ်လိုဒစ်ဂျစ်တယ် tachograph).
link ကိုမှ စပိန်၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဦး စီးဌာန စပိန်နိုင်ငံရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်